Guddoomiyihii degmada HODAN oo Muqdisho lagu dilay saacado un kadib markii uu dib ugu soo laabtay - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyihii degmada HODAN oo Muqdisho lagu dilay saacado un kadib markii uu...
Guddoomiyihii degmada HODAN oo Muqdisho lagu dilay saacado un kadib markii uu dib ugu soo laabtay
Muqdisho (Caasimada Online) – Allah ha u naxariisto’e, guddoomiyihii degmada Hodan Cabdxakiim Dhagajuun ayaa xalay lagu dilay agagaarka isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, sida ay noo xaqiijiyeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Cabdixakiim Dhagajuun ayaa ku dhintay is-rasaaseyn isgoyska ka dhacday oo dhex-martay ilaaladiisa iyo ciidan ka tirsan dowladda oo ku sugnaa isgoyska, sida aan xogta ku helnay.
Cabdixakiim Dhagajuun ayaa Arabacdii shalay un dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib muddo ku dhow laba toddobaad oo uu ku sugnaa dalka Turkiga, halkaasi oo lagu daweynayey kadib markii uu ku dhaawacmay qarax 12-kii November ka dhacay waddada 21-ka October ee Muqdisho.
Qaraxaas oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay ayaa lala eegtay baabuur uu la socday guddoomiyaha, waxaana ku dhintay laba ka mid ah askarta ilaalada u aheyd, ayada oo guddoomiyahana uu ku dhaawacmay.
Cabdixakiim Dhagajuun ayaa wax ka yar saddex saac inta aan la dilin waxa uu bartiisa facebook soo dhigay qoraalka hoose.
Qoraalka Cabdixakiim ee facebook